March 18, 2019 – Myanmar Peace Monitor
The proposed China-backed dams are located on two rivers, the N’Mai Hka and the Nga Chang Hka. Hundreds of indigenous peoples in the Yit Law also Yit Law Hkaung area of Kachin State’s Chipwe Township demonstrated against the construction of
Staff March 18, 2019 News No Comments Read more
The local hospital has one doctor, who cannot visit the camps, and the hospital lacks medicine and basic equipment,acamp leader says. Internally displaced people (IDPs) in eastern Kachin State’s Chipwe Township are failing to receive treatment and care
Staff March 18, 2019 March 18, 2019 News No Comments Read more
မွန်အမျိုးသမီးများကွန်ယက် MWN ဦးစီး၍ မွန်အမျိုးသမီးများဖိုရမ် Mon Women’s Forum ကို မော်လမြိုင်မြို့ မြိုင်သာယာရပ်ကွက်ရှိ ပိုင်ခေတ်ခန်းမ၌ ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ၃ ရက်ကြာကျင်းပခဲ့သော အဆိုပါ မွန်အမျိုးသမီးများဖိုရမ်သို့ မွန်ပြည်နယ်မြို့နယ်အသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ် ၁၅ ဦးစီအပါအဝင် ကရင်ပြည်နယ်၊ ရန်ကုန်၊ တနင်္သာတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူဒေသတို့မှ အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ် ၁၀၀ ကျော်တက်ရောက်ကြောင်း သိရသည်။ မွန်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး ဒုဥက္ကဌ မိကွန်းချမ်းနွန်က “မွန်အမျိုးသမီးရဲ့ အသိအမြင်တွေနှီးနှောဖလှယ်တဲ့ပွဲ တစ်ခုကျင်းပတာပေါ့၊ ဒီနေ့ဟာ မွန်အမျိုးသမီးနေ့လည်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီညမှာ
အစိုးရ၏ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကမ်းလှမ်းချက်ကို ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေး အမြဲတမ်း ကော်မတီ FPNCC အဖွဲ့ဝင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၇ ဖွဲ့နှင့် ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP တို့ လက်ခံတက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ လာမည့်မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်ရှိ NRPC ရုံး၌ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တစ်ဖွဲ့ချင်းစီအား အစိုးရဖိတ်ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်သော်လည်း မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် ၇ ဖွဲ့က FPNCC အနေဖြင့် တက်ရောက်ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း UWSP “ဝ” ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ လားရှိုးမြို့ ဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံ ဦးညီရမ်းက ပြောသည်။ အဆိုပါငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို KNPP ကလည်း တက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း
AA sets fire to steel truss-loaded ship in Paletwa Myanmar Government Invites Ethnic Armed Groups to Peace Talks Urgent Political Action Needed to Solve Rakhine’s Problems AA Accuses EU of Pro-Gov’t Bias in Statements on Rakhine Conflict ကုလားတန် စီမံကိန်းအတွက် ပူးတွဲစစ်ဆင်ရေး
Staff March 18, 2019 March 18, 2019 Peace related news headline No Comments Read more